Partice Evra oo heshiiska u kordhinaya kooxdiisa Juventus… (Goormee si rasmi loogu dhawaaqi doonaa?) – Gool FM
Partice Evra oo heshiiska u kordhinaya kooxdiisa Juventus… (Goormee si rasmi loogu dhawaaqi doonaa?)
Haaruun May 24, 2016
(Turin) 24 Maajo 2016 – Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo si deg deg heshiis cusbooneysiinta Partice Evra, kaasoo ogolaaday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa heshiiska kooxdiisa Juve uu kula jiro waxa uu ku eg yahay 30 bisha June, laakiin waxaa jiray wadahadallo ku saabsan heshiis uu ku sii dheereynayo sii joogitaankiisa Turin.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo badan, daafacan bidix ayaa hadda ogolaaday inuu heshiis cusub oo hal sano ah u kordhiyo kooxdiisa Bianconeri, isagoo dooq kale u haysta inuu kordhiyo hal sano oo heshiis dheeraad ah.
Waxaa la rumeysan yahay in heshiiska uu dhacay, iyadoo kooxda Marwada duqda ay heshiiska cusub ee Evra ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doontaa maalmaha soo socda.
Dhinaca kale kaddib markii uu kooxdiisa la qaaday Coppa Italia oo ay kaga guuleysteen AC Milan, Evra ayaa jariiradda Gazzetta dello Sport u sheegay inuu kooxda la sii joogi doono labo sano oo kale.
DAAFAC DA'YAR: Emmanuel Mammana oo u muuqda mid Chelsea u socda!
Xiddigaha da'yarta ah ee uu LVG siiyey safashadoodii ugu horeeysay ee kooxda kowaad (Debuts) oo aan kuu tirinay.....